Soo saaraha iyo Warshada ugu Wanaagsan ee lagu Hago Tareenka |Huaruide
• Looma baahna in dhulka la waxyeeleeyo maadaama biraha hagaha la saarayo dabaqa hoose.
Xadiidka gudaha ee wareega wareegga RGV wuxuu ka yar yahay 1.2m.
• Dhawr RGV ah ayaa ku socon kara biro wareeg ah oo isku mid ah.
Tignoolajiyada rukhsadda loop ee RGV ee gaarka ah waxay xaqiijin kartaa in RGV-gu si toos ah ugu socdo xawaare sare oo uu geesaha u rogo aamusnaan sare oo xawaare hoose leh.
• Qaado tignoolajiyada waditaanka vector-ka xiran ee xiran si loo xaqiijiyo hawlgal xawaare sare leh oo deggan iyo soo-saar sare.
• Qaado tignoolajiyada baska iyo tignoolajiyada xakamaynta PLC.
Baabuur kastaa waxa uu leeyahay hab lagu maamulo iyo xogta saadka.
• Kantaroolka tareenku waa dabacsan yahay, kaas oo la qabsan kara hab-socodka oo yarayn kara wakhtiga iyo kharashka socodka alaabta.
• Dib u dhac xoog leh oo loogu talagalay cilladda hal mashiin.
Waxay isku dari kartaa hawlaha kala duwan ee qalabka wax lagu shubo iyadoo loo eegayo baahida, isagoo si deggan u socda.
• Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka wuxuu la qabsanayaa isbeddellada qaab-dhismeedka wax-soo-saarka wuxuuna dabooli karaa baahida fidinta mustaqbalka iyo ballaarinta dabacsanaan.
• Dhulka go'an, rakibaadda ku habboon iyo hagaajinta, looma baahna in la dhiso qaab-dhismeedka birta hawada, ma jiraan shuruudo gaar ah, shuruudaha booska hooseeya, waxay badbaadin kartaa kheyraadka iyo kharashyada isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale yaraynaysaa kharashka iyo wakhtiga hawlgelinta iyo dayactirka.
Waxay u ogolaataa qaloocyada cidhiidhiga ah, si ay u habayn karto biraha si dabacsan oo waxtar leh, oo ay si buuxda u isticmaasho meel bannaan.
Culayska la qiimeeyay: ugu badnaan.1500kg
• Ku dheji lifaaqyada wax ka qabashada: palette, sanduuqa mesh, culaysyada cutubka gaarka ah
Xawaaraha socdaalka: ugu badnaan.90m/daqiiqo
• Dardargelinta: max.0.5m/s2
Xawaaraha wareejinta: 1m/s
• Korontada: baska
Nooca wareejinta: Roller iyo Silsiladda
Hore: Shuttle Raadiyaha
Xiga: Istaker Crane